सरकारी अस्पताल ठप्प, सरकार मौन « Pahilo News
प्रकाशित मिति : 8 April, 2019 7:14 am
काठमाडौं,२५ चैत । कर्मचारी समायोजनको विरोधमा चिकित्सकले गरेको आन्दोलनका कारण सरकारी अस्पतालका आपत्कालीनबाहेक सबै सेवा बन्द छन् । अस्पतालको ओपिडी मात्र होइन, महिनौँअघि तय भएका अप्रेसन पनि रोकिएका छन् । कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरकारले डाक्टरलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दीमा जान डाक्टरहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।
आन्दोलनका कारण यी सबै अप्रेसन रोकिएका छन् । कान्ति बाल अस्पतालमा भने शुक्रबार तय गरिएका सबै अप्रेसन भएका छन् । अब गर्ने अप्रेसन सर्न सक्ने निर्देशक डा. गणेश राईले बताए । कान्तिमा दैनिक १२ जनाको सामान्य अप्रेसन हुँदै आएको छ । ‘ती अप्रेसन प्रभावित भए अर्को समय लिन कम्तीमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्छ,’ निर्देशक राईले भने ।
मेजर अप्रेसनको तयारीमा रहेका बिरामीले सरकारी अस्पतालमा अब ६ महिनादेखि एक वर्ष समय कुर्नुपर्ने भएको छ । ‘सेवा सुरु भएपछि नयाँ अप्रेसनको मिति लिएर मात्रै समय निर्धारण गर्न सकिन्छ,’ परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले भने । चिकित्सकलाई तत्काल संघअन्तर्गत नराखिए समस्या थप जटिल बन्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले अत्यावश्यक ठानिएका सेवामा बन्द–हडताल नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन, टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग, सञ्चार क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन, पर्यटन, होटेल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युत्, दैनिक खाद्यवस्तु, बैंक, बिमालगायत क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने बताएको छ । नयाँपत्रिकाबाट